Fiaraha-miasa Nice-Madagascar : hametrahana «camera de surveillance» eto Antananarivo (NewsMada) | AEMW
Fiaraha-miasa Nice-Madagascar : hametrahana «camera de surveillance» eto Antananarivo (NewsMada)
Hohamafisina amin’ny alalan’ny fiaraha-miasa ny maha mpirahavavy ny tanànan’i Nice (Frantsa) sy ny tanànan’Antananarivo, izay feno 54 taona ankehitriny. Ny alatsinainy teo, noraisin’ny ben’ny Tanànan’Antananarivo Renivohitra Ravalomanana Lalao ny delegasiona avy amin’ny fikambanana Nice-Madagascar, notarihin’ny filoha Robert Verdoïa sy ny sekretera jeneraly Rabarijaona Jocelyn.
Tanàna sangany amin’ny fahadiovana sy filaminan’ny tanàna amin’ny maha tanàn-dehibe azy i Nice. Vonona hanohana eo amin’ny fitandroana ny filaminana amin’ny alalan’ny fametrahana ireny « cameras de surveillance » ireny eto amintsika ny tanànan’i Nice.
Manana traikefa momba izany izy ireo. Manaporofo izany ny nahafahana nampiato tao anatin’ny fotoana fohy, ny kamiao lehibe nampiasain’ny mpampihorohoro ka namoizana ain’olona 86 ny 14 jolay teo. Noho ny fisian’ireo « cameras » 1.600 miparitaka eran’ny tanàna, manao ny asa fitiliana no nahafahana nahafantatra izany.
Havanana amin’ny fanodinana fako ho angovo fandrehitra any an-tokantrano sy any amin’ny tobim-pahasalamana koa ny any Nice. Vonona hampihatra izany eto Antananarivo izy ireo.
Nanambara ny filohan’ny fikambanana Nice-Madagascar fa afaka handray mpiofana avy amin’ny sehatra maro samihafa avy eto Antananarivo ny any Nice raha ilaina.
Nanamarika izao fandalovana teto Antananarivo izao ny nanoloran’ity delegasiona ity ny « Médaille d’Honneur » ho an’ny ben’ny Tanàn’Antananarivo, avy amin’ny ben’ny Tanànan’i Nice.
Fanirian’ny ben’ny Tanàna roa tonta ny hankalazana amin’ny fomba manetriketrika ny tsingerintaona faha-55 naha mpirahavavy an’i Nice sy Antananarivo, amin’ny taona ho avy io.
Nampahafantarina, nandritra ity fihaonana ity, fa mbola nisy fito ireo teratany malagasy naratra mafy tany Nice vokatry ny herisetra ny 14 jolay 2016, ankoatra ny iray namoy ny ainy.
← Filohan’ny synoda FJKM, Pasitera Rakotonirina Charles : « Tsy marina ny fisian’ny fanodinkodinam-bola… » (NewsMada)
Antoko PLD : « Ny resaka sy sarimihetsika no betsaka…. » (NewsMada) →